Kandidà ho filoham-pirenena : Tena Mpino tokoa ve? -
AccueilSongandinaKandidà ho filoham-pirenena : Tena Mpino tokoa ve?
Kandidà ho filoham-pirenena : Tena Mpino tokoa ve?
08/10/2018 admintriatra Songandina 0
Zava-dehibe ho an’ny vahoaka malagasy tokoa ny maha mpino kristiana ny kandidà, izay midika ho fatahorana an’Andriamanitra. Mipetraka anefa ny fanontaniana ankehitriny manao hoe: «tena mpino tokoa ve ireo kandidà milatsaka hofidiana ireo?».
Mpino Katolika sy Protestanta samy ao anatin’ny fianakaviamben’ny FFKM ny ankamaroan’ireo kandidà, amin’ity fifidianana filoham-pirenena ity. Mazava ho azy fa tokony ho nahavita ireo dingana rehetra takiana amin’izany maha mpino kristiana azy izany avokoa izy ireo, na dia samy manana ny fomba sy ny anarana iantsoana azy aza. Izany hoe, vita Batisa sy nianatra Katekomena, ary noraisina ho Mpandray Fanasan’ny Tompo ho an’ny mpino FJKM, noraisina Kominio Voalohany, ary nahavita « confirmation » kosa ho an’ny mpino Katolika.
Tena zava-dehibe ny fahafantaran’ny vahoaka izany, tahaka ny mandeha mitady asa ihany, tsy maintsy takiana amin’ny olona mitady asa ny C.V, manaporofo ny fahaiza-manaony, ny traikefa ananany, ny adiresiny, ny dika mitovy amin’ny kara-panondrony, mba tsy ho lasa fitaovana fotsiny ny Fiangonana sanatria. Ny fahatontosan’ny kandidà iray ireo dingana takian’ny Fiangonana ireo mantsy no manaporofo ny maha kristiana matahotra an’Andriamanitra ny tenany, koa satria fotoam-pivavahana avokoa no nanamarihan’ireo kandidà ny fisokafan’ny fampielezan-kevitra omaly, dia tokony hampahanfantatra ny maha tena Mpino azy daholo izy ireo.
Tonia mpampanoa lalàna Balisama Razafintsoa : Tsy nitsoaka i Claudine Razaimamonjy
Namaly avy hatrany ny sendikan’ny mpitsara omaly maraina ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany Balisama Razafintsoa, manoloana ny filazan’izy ireo fa nisy ny firaisana tsikombakomba tamin’ny fandefasana azy hitsabo tena any amin’ny ...Tohiny
Mahambo Fenerive Est : Rendrika ny sambo Atlantis II